"HEER SARE IYO SARE" RUUSHKA, AYAA LA RAJEYNAYAA IN QIIMAHA RAASHINKA LAGU BOODO - MAQAALLO
Tani waa caddaynta falanqeeyayaasha 'saadaashii' 2019, isaga oo intaa ku daray in qiimaha alaabtu uu kordho 2 ilaa 15%. Laakiin, waqti isku mid ah, khubarada ayaa ku adkaysanaya - kor u kac weyn oo qiimaha ah ma dhici doonto.
"Dayrta lacagta sarrifka, kor u kaca kirada iyo biilasha biyaha, kor u kaca qiimaha canshuurta iyo arrimo kale oo kor u qaadi doona sicirka waa mid macquul ah," ayay leeyihiin falanqeeyayaasha. Marka laga hadlo fikraddooda, horumarinta xaaladda dhaqaale ee dalka sannadkan waa in aan la fileyn. Qiimaha roodhida ayaa kor u kici doona 5%, iyo xilliyada cuntada ee xilliga cimilada laga bilaabo 10 ilaa 15%.